Kugadzira - Sorrento Therapeutics
Judicial Manufacturing (MaAntibodies, Cell Therapies)
State-of-the-art cGMP antibody uye cell therapy inogadzira nzvimbo iri muSan Diego, CA, yakatanga kugadzirwa kuti ive nzvimbo ine zvigadzirwa zvakawanda zvekugadzira mapuroteni akacheneswa akawanda uye masoja ekudzivirira chirwere kuti ashandiswe semurapi. Nzvimbo yakagadziridzwa inosangana nezvinodiwa zvecGMP zvekugadzira zveKuongorora Mishonga Mitsva, uye ikozvino inosanganisira kugona kweserura kurapwa.
Bioserv Aseptic Zadza uye Pedzisa Contract Manufacturing Facility
Ikozvino chikamu chekugona kweSorrento, Bioserv, cGMP kontrakiti yekugadzira sevhisi sangano yakawanikwa uye yakabatanidzwa. Nezvivakwa/dzimba dzekuchenesa uye mature emhando masisitimu, Bioserv inopa aseptic uye isiri-aseptic yekuzadza/kupedzisa masevhisi anosanganisira lyophilization yebiotechnology, mishonga yemishonga uye yekuongorora maindasitiri, pamwe nekunyora / kitting uye yenguva yakareba inodzorwa tembiricha yekamuri, kutonhora uye nechando kuchengetedza.
Camino Santa Fe Oncolytic Virus Kugadzira Nzvimbo
Sorrento's hutachiona hwekugadzira nzvimbo inosanganisira kuvandudza maitiro uye analytical yekuyedza marabhoritari pamwe necGMP makamuri akachena. Mashandiro anotsigirwa anosanganisira sero tsika, kucheneswa, kuzadza uye kupedza maitiro pamwe nekuvandudza assay kuvandudza uye yemhando yekutonga. Nzvimbo iyi inopihwa rezinesi neCA Chikafu neDrug Branch uye yakabudirira kugadzira zvinhu zvezvinodhaka uye zvigadzirwa zvemishonga zvepre-kiriniki, PHASE I uye PHASE II miedzo yemakiriniki.
ADC Conjugation, Payload uye Linker Synthesis Facility
Sorrento inoshandisa cGMP nzvimbo yekugadzira Antibody Drug Conjugate (ADC) muSuzhou, China, pasi pezita rechiratidzo reLevena Biopharma. Iyo saiti yanga ichishanda kubvira 2016 uye inogona kutsigira kiriniki cGMP kugadzirwa kwezvinodhaka zvinobatanidza pamwe neantibody conjugation. Iine zvizere zvekuongorora tsigiro uye nzvimbo yakashongedzerwa kubata ine simba API (isolator), saiti iyi yakatsigira anopfuura makumi maviri emakiriniki mabhechi emiedzo yekiriniki pasi rese.
Sofusa Tsvagiridzo uye Kugadzira Nzvimbo
SOFUSA kugadzira kugona muAtlanta, GA inosanganisira chaiyo nanofabrication matekiniki padivi pekubatanidza uye kuyedzwa kwemidziyo yemidziyo. Kuvhiya uku kunokwanisa kutsigira kugadzirwa kwemidziyo yetsika kutsigira zvidzidzo zvepreclinical uye Phase I uye II miedzo yekiriniki. Pamusoro pezvo, iyo SOFUSA nzvimbo yekutsvagisa ibasa diki remhuka rine mamiriro-e-the-art ekufungidzira kugona (NIRF, IVIS, PET-CT) kuratidza zvizere mabatiro ekuunza lymphatic zvine chekuita nemajekiseni echinyakare uye infusions.
Shanyira Saiti »